Black Box Igwe Okwu Bluetooth A Na-Ebugharị Ebugharị - Imewe Mmewe
Igwe Okwu Bluetooth A Na-Ebugharị Ebugharị
Igwe Okwu Bluetooth A Na-Ebugharị Ebugharị Nke a bụ igwe okwu Bluetooth nwere ike ikwu. Ọ dị nfe ma dị obere ma nwee ọdịdị mmetụta. Emepụtara m ụdị nkwupụta ọkpọ Black Box site na ime ka ọdịdị ebili mmiri dị mfe. Iji gee ụda stereo, o nwere ndị ọkà okwu abụọ, Ekpe na Aka nri. Ọzọkwa ndị abụọ a na-ekwu okwu bụ akụkụ nke ọ bụla. Otu bu ezigbo ihe ebili mmiri na otu ụdị ebili mmiri na-adịghị mma. maka iji, ngwaọrụ a nwere ike ijikọ ejikọta ya na ngwa elektrọnik ndị ọzọ dị ka ekwentị na kọmputa site na Bluetooth ma kpọọ ụda ahụ. Ọzọkwa ọ nwere nkekọrịta batrị. Ting jikọkọta ọnụ okwu abụọ, igbe ojii na-apụta na tebụl mgbe ejighị ya.
Aha oru ngo : Black Box, Aha ndị na-emepụta ya : Elham Mirzapour, Aha onye ahịa : Arena Design Studio.
Igwe Okwu Bluetooth A Na-Ebugharị Ebugharị Elham Mirzapour Black Box